War murtiyeed::Kulanka 14-aad ee Shirweynaha Ururka Iskaashiga Islaamka. | ToggaHerer
← Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galay Shir-madaxeedka Ururka Iskaashiga Islaamka ee Makka
Q.Midoobay oo kun Askari ka dhimeysa ciidamada AMISOM ee Soomaaliya →
War murtiyeed::Kulanka 14-aad ee Shirweynaha Ururka Iskaashiga Islaamka.
Published on June 1, 2019 by Geeldoon
Kulanka 14-aad ee Shirweynaha Islaamiga ah ee Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC), oo uu hogaaminayey khadimkad Boqortooyada sacuudiga King Salman bin Cabdulcasiis Al Saud, ayaa ka socodaa magaalada barakeysan ee Macca, Iyadoo ka qayb galka hoggaamiyayaasha dalalka xubnaha ka ah OIC.
Sida lagu sheegay war martiyeedka ururka iskaashiga islaamka OIC, shirku, oo lagu qabtay Magaalada Makka: Gacan-siinta fal;astiin Mustaqbalka”, waxay wax ka qabataa arrimaha kala duwan iyo munaasabadaha hadda jira ee dunida Islaamka ah si loo soo afjaro duruufaha midaysan.
Shirku wuxaa looga uu ka hadli doonaa isbeddelka arrimaha Falastiiniyiinta iyo Al-Quds Al-Sharif, taageerada qaxootiga Falastiiniyiinta iyo UNRWA, iyo sidoo kale xaaladda hadda jirta ee Suuriya, Yemen, Liibiya, Suudaan iyo Soomaaliya.
hirku wuxuu sidoo kale ka doodi doonaa isbeddeladii dhowaan ee la xidhiidha xayiraadda gantaalada ee Al-Houthi oo ku wajahan dhulka Sacuudi Carabiya iyo weerarkii rabshadaha ee ka dhacay dhulka Boqortooyada.
Hoggaamiyeyaashu waxay sidoo kale ka hadli doonaan arrimaha ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee Muslimka ah, dabeecadda Islamophobia, baahida loo qabo in lagu wajaho argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha, iyo arrimaha kale ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqameed iyo arrimaha bulshada ee ku saabsan Ururka.
Shirkii 14aad ee Islaamka ayaa ku beegan 50-guuradii ka soo wareegtay aasaaskii Ururka Iskaashiga Islaamka, oo si rasmi ah loo furay 25-kii September, 1969-kii isaga oo ka jawaabay fal-dambiyeedka gubashada Masaajidka Al-Aqsa ee ku yaal Jerusalem
Kulanka Isniinta ee loogu talagalay berri ayaa ah shirkii afraad ee lagu qaban lahaa Makkah, oo lagu soo bandhigay goobaha calaamadaha ah. Dalalka martida loo yahay waxay doonayaan inay adeegsadaan calaamaddan si ay kor ugu qaadaan midnimada islaamka ayna u adeegaan arrimaha caadiga ah.
25kii Janaayo 1981, Makkah waxay martigelisay shirkii ugu horeeyay, Shirka Shirwaynaha Saddexaad ee Islaamka, kaas oo lagu qabtay mawduuca “Falastiin iyo Yeruusaalem
Kulanka, oo lagu qabtay Rehabka Masjidka Quduuska ah ee hoosta ka ah King Abdullah bin Abdul Aziz, wuxuu diiradda saarey laba arrimood oo muhiim ah: xaaladda Falastiin iyo geeddi-socodka horumarinta adduunka Islaamka.
Bishii Disember 7, 2005, oo u dhiganta 5 Dhu al-Qaac 1426, Makkah waxay martigelisay shirkii khaaska ahaa ee Shirweynihii Islaamiga ahaa ee lagu qabtay “Kulan Caqabadaha qarnigii labaatanaad ee udubdhexaadka ahaa”, kaas oo hoggaanka Sucuudigu rabay inuu abuuro barnaamij wadajir ah oo ay wadaan Dowladaha Xubinta ka ah Iyadoo la cusbooneysiiyey caqabado siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqan.
King Abdullah ayaa ugu baaqay aqoonyahanka iyo fikradaha qaranka in ay ku kulmaan Mecca si ay u tixgeliyaan xaaladda Ummadda Islaamka, si ay u abuuraan aragtiyo iyo aragtiyo iyo in ay soo jeediyaan xalalka ugu fiican ee caqabadaha hortaagan qaranka ee dhinacyo kala duwan.
Waxay la kulmeen dhowr aqoonyahanno iyo aqoonyahanno ka kala yimid dalalka kala duwan ee Makkah muddadii 5-7 ee bishii Shaaban 1426 H oo u dhiganta 9-11 Bishii Sebtembar 2005, waxayna baartey caqabadaha hortaagan waddanka ee aqoonta, dhaqanka, warbaahinta, dhaqaalaha iyo horumarka, Talooyin si aad wax uga qabato caqabadahaas.
Iyada oo ku saleysan talooyinka, Summit Islaamiga taageeray horumarinta Barnaamijka Toban Year of Action ee Ururka Iskaashiga Islaamka, taas oo dib u caqabadaha ugu waaweyn ee dunida Islaamka casriga ah ayaa waxa soo wajahay iyo siyaabaha ay wax uga qabtaan si hubaa dhexdhexaadnimada iyo xaqiiqo in ay u adeegaan sida barnaamij gorgortan wax ku ool ah ee fulinta iyo codsiga dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka.
August 14, 2012, oo u dhiganta 26 Ramadan 1433 Mecca marti kalfadhiga afraad gaarka ah ee shirka madaxeedka Islaamka, lagu qabtay faasaha “shirwaynaha midnimo Islaamka”, iyadoo laga jawaabayo wixii la soo maray by Dawladaha xubinta ka ah qaar ka mid ah caqabadaha, iyo danaha boqortooyada Saudi Arabia on aasaaskii Charter Islaamka ah ee wax ka qabashada dalalka Islaamka la kasta oo kale.
Shirku wuxuu soo saaray Axdiga Makka ee Hagaajinta Iskaashiga Islaamka, kaas oo boqrooyinka iyo madaxda dawladaha Islaamku ay isku dayeen in ay dhistaan awoodaha dalalka Islaamka iyo hay’addahooda iyo inay ka hor tagaan wajiga khilaafka ee ka bilowday Ummadda Islaamka ee ku salaysan jinsiyadaha, xagjirayaasha iyo odayaasha. , Oo aan faragelinnin arrimaha ku saabsan arrimaha gudaha.
Dhanka kale, diirada Islaamku waxa uu mar kale ku sii jeedaa magaalada Mecca si looga wada hadlo natiijada shirkii afraad ee Islaamka oo ay martigelisay Mecca xaaladaha gaarka ah ee gobolka Carabta iyo adduunka Islaamka, ugu yaraan wax horumar ah oo ku saabsan arrinta Falastiin, iyo kor u qaadista weerarrada argagixisada ee Houthi ee xarumaha rayidka ee Sacuudi Carabiya, Islamophobia iyo ifafaale sii kordhaya ee Islaamka.
Xoghayaha Guud ee Ururka Iskaashiga Islaamka, Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, ayaa sheegay in xilligii Shirkii 14-aad ee Islaamku uu ku adkeynayo Mawqifka Boqortooyada Saudi Arabia ee hogaaminaysa siyaasad ahaan iyo dhaqaale.
Al-Othaimeen ayaa yiri: “Baaxadda dhibaatooyinka iyo baaxadda caqabadaha haysta caalamka Islaamka ee maalmahan waxay u baahan yihiin dadaal diimeed oo ay ku wajahayaan caqabadaha haysta Ummadda Islaamka, taas oo macnaheedu yahay hoggaanka wadajirka ah ee xallinta dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka iyo wax ka qabashada caqabadaha hortaagan dunida Islaamka, Laga soo bilaabo Boqortooyada Sucuudiga waxay yeelan doontaa saameyn togan, Ilaah wuu rabaa. ”
Al-Othaimeen waxa uu intaa ku daray in Boqortooyada Ingiriisku martigelisay shirkii, kaas oo ka dhex socda xaalado iyo caqabado hortaagan dunida Islaamka, waxa ay ka dhigan tahay in ay xoogga saaraan jagada hoggaamineed ee Boqortooyada Sucuudiga oo ah xarunta guud ee Ururka.
Al-Othaimeen wuxuu ku amaanay dadaalka ay wadaan Mas’uuliyiin ka tirsan Masjidka Labaad ee Quduuska ah King Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud iyo Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Amiirka Qaranka iyo Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ah ee dadaalka dib loogu mideynayo Ummadda Islaamka oo u adeega sababaha iyo in la caddeeyo sawirka dhabta ah ee Islaamka dhexdhexaad ah.